Mkpado: 2017 | Martech Zone
Gịnị Gbanwere Banyere ratelọọrụ ịde blọgụ n'ime afọ ndị a?
Thursday, January 18, 2018 Thursday, January 18, 2018 Douglas Karr
Ọ bụrụ na ị na-eso m n'ime afọ iri gara aga, ị maara na m dere Corporate Blogging for Dummies azụ na 2010. Ọ bụ ezie na odida obodo nke dijitalụ mgbasa ozi agbanweela nnukwu mgbanwe n'ime afọ 7 gara aga, ekwenyeghị m n'eziokwu na enweela ọtụtụ mgbanwe mgbe ọ bịara n'akwụkwọ na ụlọ ọrụ na-emepe emepe ịde blọgụ atụmatụ. Ndị ọchụnta ego na ndị ahịa ka na-agụ agụụ maka nnukwu ozi, ụlọ ọrụ gị nwere ike ịbụ akụ ha
Branddị Mbido Gị Dị Njikere maka CES? Mkpa Branding Ndepụta maka Oge Mbido
Tọzdee, Nọvemba 2, 2017 Tọzdee, Nọvemba 30, 2017 Pamela Webber
O doro anya na ị nụla akụkọ sitere na ihu ihu na ị heedara ntị n'ịdọ aka na ntị sitere n'aka ndị enyi na ndị ọrụ ibe gị. Mana ọ bụrụ na ị bụ otu n’ime ọtụtụ puku ndị ọchụnta ego debara aha ha maka ịbịa nzukọ ọnwa Jenụwarị kwa afọ nke amara nke ọma dịka CES (Consumer Electronics Show) na Las Vegas maka oge mbụ n’afọ a (Jenụwarị 9-12th), ọ nwere ike isiri ike iji uche hụ n'ezie. ihe dị n'ihu gị. Kedu maka nke a: Cheedị echiche banyere nnukwu ọnụ ụlọ egwuregwu bọọlụ na nnukwu ụlọ nzukọ nke ọtụtụ nde mmadụ jupụtara
Adobe Digital Insights: Steeti nke Digital Union 2017
Saturday, July 8, 2017 Satọde, Febụwarị 13, 2021 Douglas Karr
Adobe Digital Insights etinyewo ihe ọmụma mara mma (anyị ga-atụ anya ihe ọ bụla dị iche?) Na State nke Digital Union - lekwasịrị anya na mgbasa ozi dijitalụ na atụmanya ndị ahịa metụtara. Ikekwe ihe kachasị amasị m gbasara akwụkwọ ozi a bụ na ha were ọtụtụ data ma jikọta ya na ọnụọgụ nhọrọ nke nkwubi okwu: Nkwụ ụgwọ Ad na - arị elu - dịka ndị mgbasa ozi kachasị na - agbanye dijitalụ, ọchịchọ maka ohere mgbasa na
4 Ihe ndi ahia nwere ike imuta na ihe omuma nke ubochi nke nne iji kwalite mgbasa ozi ubochi nke nna
N'oge na-adịghị anya, ájá kwụsịrị site na mkpọsa Daybọchị Ndị Nne karịa ndị ahịa na-atụgharị ụbọchị Nna ha. Mana tupu ịtọọ ọrụ Father'sbọchị Nna na nkume, ndị ahịa ọ nwere ike ịmụta ihe ọ bụla site na mbọ ụbọchị nne ha nwere ike inyere ha aka ịkwalite ahịa na June? Mgbe anyị nyochachara nlezianya nke ụbọchị ahịa 2017 na ahịa data, anyị kwenyere na azịza ya bụ ee. N’ọnwa tupu Motherbọchị Ndị Nne, ndị otu anyị chịkọtara data n’aka ndị ọzọ
8 Digital Design Trends maka 2017
Tuesday, February 14, 2017 Tuesday, February 14, 2017 Douglas Karr
Coastal Creative na-arụ ọrụ dị egwu na-edebe usoro ihe eji emepụta ihe site na iwepụta ezigbo akwụkwọ ozi kwa afọ. 2017 dị ka afọ siri ike maka usoro imepụta - Ahụrụ m ha niile n'anya. Anyị ewebatala ọtụtụ ihe ndị a maka ndị ahịa anyị na saịtị anyị. N'ihi na n'afọ nke atọ na a n'usoro, anyị na-na wepụtara Kacha ọhụrụ mbipute anyị na-ewu ewu imewe na ọnọdụ infographic maka 2017. Ọ bụ ezie na e nwere ụkpụrụ nke imewe
Social Media Marketing Statistics Media gaghị agbaghara!
Mọnde, Febụwarị 13, 2017 Satọde, Febụwarị 13, 2021 Douglas Karr
N'oge ụfọdụ ọtụtụ iri afọ gara aga, anyị malitere ịgwa onwe anyị na ezinụlọ ọ bụla nwere redio, nwezie ekwentị, ma mesịa nwee televishọn. Ekwenyere m na anyị ruru saturation ahụ na mgbasa ozi mmekọrịta ... ọ dị anyị mkpa ịkọwapụta mmetụta ma ọ bụ gbalịa ime ka azụmahịa kwenye na mgbasa ozi mmekọrịta ebe a ka ị nọrọ? Ee, anaghị m atụ anya. Nke ahụ apụtaghị na ọ bụ oge maka ndị ahịa ịhapụ ihe niile ma tinye ya niile
Etu ndi ahia B2B kwesiri isi kwalite usoro ha
Tọzdee, Febụwarị 9, 2017 Satọde, Febụwarị 13, 2021 Douglas Karr
Ka anyị na-agba ajụjụ ọnụ maka ndị isi azụmaahịa, nyocha ihe ndị dị n'ịntanetị, wee hụ nsonaazụ nke mbọ anyị iji nyere ndị ahịa anyị aka, enweghị obi abụọ gbasara ike azụmaahịa ọdịnaya maka mbọ inweta B2B. Ulo oru ahia na achoputa ihe ha choro n’iru karia ugbua. Otú ọ dị, nsogbu dị na ya bụ na ụlọ ọrụ dị iche iche na-emepụta ọdịnaya anaghị arụ ọrụ. Mgbe a jụrụ ndị na-ere ahịa B2B gara nke ọma ihe kpatara azụmaahịa ọdịnaya ha ji rụọ ọrụ, 85% meriri ogo dị elu, rụọ ọrụ nke ọma
Fraịde, Jenụwarị 13, 2017 Saturday, October 20, 2018 John Koetsier
Dị ka onye nzuzu, esonyeere m 165,000 ndị ọzọ na-ahụ maka nkà na ụzụ, ndị na-ere ahịa, ndị na-eme ihe ike, na ndị ọzọ na CES 2017 izu gara aga. Eji m oge m niile na-ezute ndị mmadụ. Ma ọ bụ, n'ụzọ ziri ezi karị, na Lyfts, Ubers, na cabs na-akwado ndị njem Vegas na-aga n'okporo ụzọ m ịga zute ndị mmadụ. Mana edebere m awa asatọ maka ihe onye ọ bụla hụrụ teknụzụ n'anya kwesịrị ime ọ dịkarịa ala otu oge: na-awagharị n'ala ụlọ nzukọ ndị isi na CES, ndị